LED Mwenje Mugadziri/Mutengesi kubvira 2004 | LEDIA Mwenje
LEDIA yanga ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatinoshanda navo vanoremekedzwa pasi rese.
Led High Bay Chiedza
Led Tri-proof Chiedza
Gym & Varaidzo
Raibhurari & Mamuseum
Featured Products kana New zvinhu
LEDIA yanga ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatinoshanda navo pasi rese,
ese ari DLC/UL/ETL/TUV/SAA/CE/ENEC vanokwanisa.
Hukama hwepedyo hwekushanda nevatengi hunogonesa timu yedu kuendesa bespoke sevhisi iri yechipiri kune imwe.
Yedu yakazvitsaurira dhizaini timu uye timu yekugadzira inokwanisa kupa inogadzirisa mhinduro kuti ikwane.
Yakavambwa muna 2004, LEDIA inyika yepamusoro tech bhizinesi. Iri muHuadu District (padyo neGuangzhou Baiyun International Airport), uye idivi reHonglitronic Group. Mushure memakore ebudiriro, LEDIA iyo yakagadzira mukurumbira wakanaka zvese zvemumba nekumhiri kwemakungwa, yave iyo inotungamira kambani mumutsara wekuvhenekesa indasitiri. Kune kusimba kwekambani, matarenda uye hunyanzvi ndiyo kiyi nepo mhando iri ropa rehupenyu.
LEDIA ine nhanho yenyika CNAS yekuongorora marabhoritari, ichiita shuwa kuti zvigadzirwa zvese zvinopfuura nemabvunzo ane hukama zvisati zvaenda kumusika. Zvigadzirwa zvatinogadzira zvinosanganisira LED bare board strip light, PVC/silicone strip light, cabinet light and other lighting fixture zvese zvakawanikwa China CCC certification, US UL/ETL certification, EU CE, ROHS, TUV and Australia SAA, DLC, ENEC authentication, kuvimbisa kuvimba kwevatengi mune zvigadzirwa zvedu. Ratidza nyika nemagetsi emagetsi zvigadzirwa ndizvo zvinoteverwa neLEDIA nguva dzese.
Chiratidzo-Iva bhizinesi rakatanhamara mumunda wemwenje we LED muChina.
Mission-Gadzira kukosha kwekuvhenekera nesainzi uye tekinoroji, uye edza kuzadzisa zviroto zvechikwata.
Chinhu chekutanga chatinoita kusangana nevatengi vedu uye kutaura kuburikidza nezvinangwa zvavo pane ramangwana purojekiti.
Panguva yemusangano uyu, inzwa wakasununguka kutaura pfungwa dzako uye kubvunza mibvunzo yakawanda.
LEDIA yanga ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatinoshanda navo pasi rese, kusanganisira LED Outdoor Lighting, LED Industrial Lighting, LED Commerce Lighting uye LED Decorative Mwenje.
BETTER BATA BUSINESS ARInani
Kubata Munhu: Zuva reZuva
Kero: Nha.1 Xianke 1st Road, Huadong Town, Huadu Dist, Guangzhou, China